Ungasebenza njani ngeefayile zePDF kwiMicrosoft Edge Chromium | Iindaba zeGajethi
Ungasebenza njani ngeefayile zePDF kwiMicrosoft Edge Chromium
Ukusukela ukuba uMicrosoft wabhengeza ukuba iyasebenza kuhlobo olutsha lwesikhangeli sayo se-Edge, Windows 10 kwaye isekwe kwiChromium (injini efanayo efumaneka kwiGoogle Chrome), abasebenzisi abaninzi Ndikulungele ukuzama kwakhona Kwindalo Windows 10 isikhangeli, ithuba abalisebenzise ngokupheleleyo kwaye sele ebavumele ukuba baphinde babelane ngesabelo sentengiso.
Ngaphambi kokukhutshwa kwenguqu yokugqibela yeChromium esekwe kwiMicrosoft Edge, isabelo sentengiso sikaEdge yayiyi-3%. Kwiinyanga ezimbini emva kokumiliselwa, sele ikwi-5%, nangona iseyindlela ende ukusuka kulawulo lweChannel, enesabelo sentengiso se-67%. Umda omtsha ayisiyiyo kuphela ekhawulezayo kwaye isebenzisa izinto ezimbalwa kakhulu xa kuthelekiswa nohlobo lwangaphambili, kodwa kananjalo, iyahambelana nayo nganye kunye nolwandiso lwe-Chrome.
Ukuba uhlala usebenzisa i-Chrome enkosi kumathuba angenasiphelo anikezelwa ngokongezwa kwawo, unako yenza utshintsho kwisikhangeli esinye ukuya kwesinye ngaphandle kwengxaki. Ukudityaniswa Windows 10, yenza ukuba isebenze ngokugqibeleleyo, ibengcono kunaleyo isinikwa yiChannel, isikhangeli esihlala sityholwa (kwaye kufanelekile) sokuba sisidliwayo sezixhobo kuyo nayiphi na inkqubo yokusebenza (nangona kwi-macOS is a bit of a wolule).
Windows 10 ayijoliswanga kuphela kwiikhompyuter zedesktop, kodwa iyahambelana neekhompyuter zescreen sokuchukumisa, ezinje ngeMicrosoft Surface uluhlu, uluhlu olunikezela ukungaguquguquki kokuba nenkqubo yokusebenza yedesktop kwithebhulethi, Ithebhulethi ekhawuleza ukuba yikhompyuter xa sifuna ukongeza ikhibhodi.
Uninzi lwabasebenzisi bachitha iiyure ezinde kwisikhangeli, isikhangeli esingakwazi ukufikelela kuso kuphela kwimifanekiso, iividiyo, ulwazi nangaluphi na uhlobo ... kodwa Isixhobo sokusebenza kwiinkampani ezininzi zishiya ecaleni izicelo zazo ezazisetyenziswa ngaphambili.
1 Vula kwaye uhlele iifayile kwifomathi yePDF
1.1 Gcwalisa iifom zePDF
1.2 Gqamisa / ukrwele umgca ngaphantsi isicatshulwa kunye nezicatshulwa
1.3 Funda isicatshulwa
1.4 Jikelezisa uxwebhu
1.5 Gcina lonke uhlengahlengiso
2 Yintoni esingenakuyenza ngeMicrosoft Edge kwiifayile zePDF
3 Uyikhuphela njani iMicrosoft Edge Chromium
Vula kwaye uhlele iifayile kwifomathi yePDF
Iifayile zePDF zezona fomathi zisetyenziswayo namhlanje zokwabelana ngamaxwebhu, esidlangalaleni okanye abucala, enkosi kwiimpawu ezahlukeneyo esinikwa yile fomathi. Kubonakala ngathi iMicrosoft kuphela komenzi oye waqonda ukuba bahamba kunye kwaye ukusukela kwinguqulelo yokuqala yeEdge, yongeze amandla okuvula nokusebenza namaxwebhu akule fomathi. Ngapha koko, ukuba awunasicelo esixhasa iifayile kwifomathi yePDF, iMicrosoft Edge iya kukukhathalela ukuyivula. Yintoni esinokuyenza ngeMicrosoft Edge kunye neefayile zePDF?
Gcwalisa iifom zePDF
Kwimarike singafumana inani elikhulu lezicelo ezisivumela ukuba sisebenze ngefomathi yePDF, uninzi lwazo oluhlawulwayo, nangona iimfuno zethu zincinci, njengokukwazi gcwalisa uxwebhu olusemthethweni olulula ukuze ukwazi ukuyiprinta kamva okanye wabelane ngayo.
NgeMicrosoft Edge singagcwalisa naluphi na uhlobo loluntu okanye uxwebhu lwabucala olwalufomathiwe ngaphambili ukubonisa iindawo ekufuneka sizigcwalisile (wonke umntu unazo), esivumela ukuba sigcwalise amaxwebhu bazithumele ngothungelwano ngaphandle kokuskena, uprinte kwaye ubathumele ngeposi okanye ubabonise ngokwasemzimbeni.
Gqamisa / ukrwele umgca ngaphantsi isicatshulwa kunye nezicatshulwa
Xa kuziwa ekufundeni okanye ngokucophelela ukufunda uxwebhu kule fomathi, kunokwenzeka ukuba sinomdla wokuqaqambisa zeziphi ezona ndawo zibalulekileyo, nokuba ubalaselisa icandelo lesicatshulwa okanye wenze izichazi ngesandla. I-Edge entsha, njengangaphambili, ikwasivumela ukuba siyenze yomibini le misebenzi, nangona sisenza izichasiselo, kufuneka sibenomphefumlo olungileyo kunye nempuku okanye sisebenzise isitena ngqo kwiscreen sokuchukumisa isixhobo ukuba sinayo.
Gqamisa isicatshulwa Kulula njengokukhetha ngaphambili isicatshulwa esifuna ukuqaqambisa, ukucofa ekunene kunye nokuqaqambisa imenyu, ukukhetha isicatshulwa esifuna ukusisebenzisa. I-Edge isinika imibala emine eyahlukileyo: omthubi, ohlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza kunye nobomvu, imibala esinokuyisebenzisa ngokungafaniyo ukudibanisa imihlathi nezihloko ezahlukeneyo kuxwebhu.
Elinye inqaku elinika umdla i-Edge elisinika lona linokwenzeka funda itekisi ngokuvakalayo ngokusebenzisa iwizard esinayo kwikhompyuter yethu, esivumela ukuba senze ezinye izinto ngelixa simamele uxwebhu endaweni yokufunda. Ukuthatha ithuba lomsebenzi, kufuneka sikhethe isicatshulwa, cinezela iqhosha le mouse lasekunene kwaye ukhethe iLizwi.
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye ufumene uxwebhu olukwifomathi yePDF leyo ayijoliswanga kakuhle, Esinyanzela ukuba sijikeleze uxwebhu kunye nesicelo somntu wesithathu ukuze sikwazi ukulifunda ngokufanelekileyo ukuba asifuni kujikelezisa esweni okanye entloko. Enkosi kuEdge, lo msebenzi uyafumaneka, umsebenzi osivumela ukuba sijike ngapha nangapha nangapha.
Gcina lonke uhlengahlengiso
Nje ukuba senze lonke utshintsho uEdge asinike lona ngamaxwebhu kwifomathi yePDF, sinako gcina utshintsho kuyo, nokuba kukwincwadi enye kwikopi yayo. Utshintsho luya kugcinwa kwifayile kwaye luya kufumaneka kuye wonke umntu ovula uxwebhu, ngaphandle kwesicelo abasisebenzisayo.
Yintoni esingenakuyenza ngeMicrosoft Edge kwiifayile zePDF
Okwangoku, masithembe ukuba kwiinguqulelo ezizayo ziya kuphunyezwa, yinto enokwenzeka amaxwebhu okusayina ukongeza utyikityo ebesilugcine ngaphambili kwikhompyuter yethu, umsebenzi oya usiya usanda ngokwanda, ngakumbi kwicandelo leshishini xa usayina izivumelwano zengqesho okanye naluphi na uhlobo loxwebhu.
Uyikhuphela njani iMicrosoft Edge Chromium
Ukuba awukanikezi inguqulelo yeChromium entsha yeEdge ithuba, sele uthatha ixesha. Ukuba unayo Windows 10 ihlaziyiwe kuhlobo lwamva nje, kunokwenzeka ukuba sele uyifakile kwikhompyuter yakho kwaye uqaphele ukuphucuka okukhulu ekusebenzeni kwayo. Ukuba oku akunjalo, ungaya ngqo kwi Microsoft iwebhusayithi kwaye ukhuphele le nguqulo intsha isekwe kwiChromium, uguqulelo iyafumaneka kuzo zombini iiWindows kunye neMacOS.
IMicrosoft Edge Chromium ayihambelani kuphela neWindows 10 kunye neMacOS, kodwa, iyasebenza nakwiWindows 7, Windows 8 kunye neWindows 8.1. Kukwakho nohlobo lwe-iOS kunye ne-Android ekhoyo kwaye enkosi ngongqamaniso lweebhukumaka kunye nembali, sinokufikelela kwidatha efanayo esiyigcine kwikhompyuter.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungasebenza njani ngeefayile zePDF kwiMicrosoft Edge Chromium
Uyisebenzisa kanjani imvelaphi ebonakalayo kwi-Zoom yeefowuni zevidiyo
Isikhokelo seKhaya esiDibeneyo: Ungazicwangcisa njani izibane zakho